Manju shree finance(Manju shree finance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
दोस्रो त्रैमासमा मञ्जुश्री फाइनान्सको छलाङ, ईपीएस रु. ३५.०५
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। फाइनान्सको दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा खुद नाफामा छलाङ मारेको छ । गत आर्थिक वर्षमा संस्थाले ६५ लाख २९ हजार रुपैयाँमात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा...
मन्जुश्री फाइनान्सको साधारणसभाबाट लाभांश पारित, सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट २ निर्विरोध निर्वाचित
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको बाह्रौ वार्षिक साधारण सभा आज बुधबार सम्पन्न भएको छ । सो सभा थापागाँउ व्याङकेट, नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न भएको थियो । साधारणसभाद्वारा आ.व. २०७५-०७६ को लागि प्रस्तावित ९.८० प्रतिशत नगद लाभांश(वोनश शेयर तथा नगद लाभांशको करसमेत) र १.७५ प्रतिशत बरावरको वोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय पारित भएको छ । यो...
एक बैंक र दुई वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन, कुन–कुन र कति ?
काठमाण्डौ । बोनस सेयरका लागि कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक, आईसीएफसी फाइनान्स र मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले यी तीनै वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकको २१६.३६ रुपैयाँ, आईसीएफसी फाइनान्सको १५२.३८ रुपैयाँ र...
आज अन्तिम मौका, सुरक्षित गर्नुस् यी चार वित्तीय संस्थाका लाभांश
काठमाण्डौ । दुई विकास बैंक र दुई फाइनान्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज सोमबार अन्तिम मौका रहेको छ । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, मञ्जुश्री फाइनान्स र आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको छ । साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनका लागि यी चारै वित्तीय संस्थाले भोलि मंगलबार (पुस १५ गते) देखि बुक...
मञ्जुश्री फाइनान्सले पुस २९ गते ११.५५% लाभांश अनुमोदन गर्ने
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो १२ औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति तय गरेको छ । फाइनान्सको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा पुस २९ गते गर्ने निर्णय गरेको हो । सभामा गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट फाइनान्सले सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रसताव गरेको कुल ११.५५ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्ने छ । फाइनान्सले...
मञ्जुश्री फाइनान्सले गर्यो लाभांश प्रस्ताव, नगद र बोनस सेयर कति ?
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको हिजो बुधबार बसेको सञ्चालक समितिले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । संस्थाले चुक्तापुँजी ८० करोड ४० लाख ६० हजार २१० रुपैयाँको कुल ११.५५ प्रतिशतले हुन आउने ९ करोड २८ लाख ६८ हजार ९५४.२५ रुपैयाँबराबरको लाभांश वितरण गर्ने...
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ५.२७ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । संस्थाको समीक्षा अवधिमा सञ्चालन...
मञ्जुश्रीको विशेष बचत खाता, रु. ५ हजारको खातामा बग्रेल्ती सुविधा
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले मञ्जुश्री विशेष बचत खाता नामक नयाँ बचत खाता संचालनमा ल्याएको छ । न्यूनतम मौज्दात रु. ५००० मा बचतकर्ताहरुले वार्षिक ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त गर्नसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । जसमा निःशुल्क डेविट कार्डका साथै जुनसुकै एटीएमबाट बिनाशुल्क रकम झिक्न सकिने बताइएको छ । साथै निःशुल्क चेक बुक,...
मञ्जुश्री फाइनान्सको सूचिकरण स्थगन ७५ दिनपछि फुकुवा, सेबोनको शंकास्पद भूमिका
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले मञ्जुश्री फाइनान्सलाई बिना कारबाही छाडिदिन आग्रह गरेसँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सो कम्पनीलाई सूचिकरण स्थगनको ७५ दिनपछि सफाई दिएको छ । नेप्सेले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त पत्र र सोही आधारमा मञ्जुश्रीले समेत लेखेको पत्रलाई आधार मानी लामो समयदेखि स्थगित कम्पनीको सूचिकरण...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । लाभांश दरमा चलखेल गरेका कारण मञ्जुश्री फाइनान्स समस्यामा पर्ने देखिएको छ । यो कम्पनीले लाभांश दरमा चलखेल गरी संस्थागत रुपमै इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको दाबीसहित नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेडले आवश्यक प्रमाण र कागजातको साथमा कम्पनीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गर्ने भएको...
मञ्जुश्रीको नाफामा ५१ % को प्रगति, अन्य सूचक पनि सन्तोषजनक
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्ममा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ । यो फाइनान्स कम्पनीले अघिल्लो वर्ष ६ करोड ४२ लाखमा सीमित खूद नाफालाई बढाएर ९ करोड ७० लाखको उचाई चुमाएको छ । यो भनेको करिब ५१ प्रतिशतको प्रगति हो । फाइनान्सले १८ करोड ९६ लाखमा सीमित खूद ब्याज आम्दानीलाई बढाएर २४ करोड ५० लाखको...
मञ्जुश्री फाइनान्सको आशलाग्दो प्रगति, अधिकांश सूचकमा फड्को
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म अधिकांश बित्तीय सूचकलाई मजबुत बनाएको छ । चुक्तापूँजीमा भएको भारी वृद्धि अनुसार नाफा कमाउन नसक्दा इपीएसमा गिरावट आएको देखिए पनि बाँकी सूचकमा पनि यो कम्पनीको प्रगति उत्साहप्रद देखिएको छ । मञ्जुश्रीले समीक्षा अवधिमा ५ करोड ११ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको हो...
काठमाडाैँ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको नाफामा सुधार आएको छ । कम्पनीले आज सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक विवरण अनुसार गत वर्षको भन्दा ४९ प्रतिशतले नाफा बढेको देखिएको हो । फाइनान्सले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा ५ करोड ४६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खुद आम्दानी गरेको छ । गत...
चैत ८ गतेदेखि मञ्जुश्रीको हकप्रद, कहाँबाट दिने आवेदन ?
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमीटेडले आगामी चैत ८ गतेदेखि १०० बराबर ५ को अनुपातमा हकप्रद सेयरको निश्कासन गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३ लाख ६२ हजार १ सय ९० कित्ता हकप्रद सेयर निश्कासन गर्न लागेको हो । इच्छुक सेयरधनीले बैशाख १२ गतेसम्म खरीदका लागि आवेदन दिइसक्नुुपर्नेछ । कम्पनीको हकप्रद निश्कासन तथा...
मञ्जुश्रीका सेयरधनीले पाउने भए ६ % बोनस, ५ % हकप्रद पनि आउँदै
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीलाई ६ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । यो फाइनान्सको पुस २८ गते बसेको १४८ औं बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वितरणयोग्य नाफाबाट सेयरधनीलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो । हाल यो कम्पनीको चुक्तापूँजी ७२ करोड ४३...